FMUSER 20KW RF Dummy Load ရောင်းရန်ရှိသည်။
FMUSER 20KW Rack RF Dummy Load သည် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်သည်-
20000 watt dummy load rack မှလွဲ၍ 1000 watt ၊ 1200 watt ၊ 2000 watt ၊ 2500 watt ၊ 3000 watt ၊ 4000 watt ၊ 1kw ၊ 1.2kw ၊ 2.5kw ၊ 3kw ၊ 4kw ၊ 5kw ၊ , 1000W, 1200W, 2500W, 3000W, 4000W, 5000W ။
ထို့အပြင်၊ RF dummy loads များ၏ မတူညီသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရောင်းချရန် အလွန်မြင့်မားသောပါဝါ RF ဝန်အား 15000 watt, 50000 watt, 75000 watt, 100000 watt, 200000 watt, 10kw, 15kw, 50kw, 75kw, 100kw, 10000kw, 15000kw, ၊ 20000W ၊ 50000W ၊ 75000W ၊ 100000W ၊ 200000W ၊ XNUMXW ၊ အလတ်စားနှင့် အကြီးစား FM ရေဒီယိုလိုင်းများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဤ RF အမိုက်စား Load များသည် ယခုအခါ ပထမလိုင်း RF နည်းပညာဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွင် ပါဝင်သည့် သုံးစွဲသူများထံမှ နှစ်သက်ဖွယ်ရာများစွာကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
FMUSER သည် အောက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများရှိ အကောင်းဆုံး FM အသံလွှင့်ကိရိယာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်- အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ အန်ဒိုရာ၊ အန်ဂိုလာ၊ အန်တီဂွာနှင့် ဘာဘူဒါ၊ အာဂျင်တီးနား၊ အာမေးနီးယား၊ သြစတြေးလျ၊ သြစတြီးယား၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ The Bahamas၊ Bahrain၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘာဘေးဒိုးစ်၊ ဘီလာရုစ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်၊ ဘယ်လီဇ်၊ ဘီနင်၊ ဘူတန်၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ဘော့ဆွာနာ၊ ဘရာဇီး၊ ဘရူနိုင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဘာကီနာဖာဆို၊ ဘူရွန်ဒီ၊ ကာဘိုဗာဒီ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ကင်မရွန်း၊ ကနေဒါ၊ ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ၊ ချဒ်၊ ချီလီ၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကိုမိုရော့စ်၊ ကွန်ဂို၊ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ၊ ကော်စတာရီကာ၊ အိုင်ဗိုရီကာ၊ ခရိုအေးရှား၊ ကျူးဘား၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဂျီဘူတီ၊ ဒိုမီနီကာ၊ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ၊ အရှေ့တီမော (တီမောလက်စ်တေ ) အီကွေဒေါ၊ အီဂျစ်၊ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ၊ အီကွေတိုရီရယ်ဂီနီ၊ အီရစ်ထရီးယား၊ အက်စ်တိုးနီးယား၊ အက်စဝါတီနီ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဖီဂျီ၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂါဘွန်၊ ဂမ်ဘီယာ၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ ဂျာမနီ၊ ဂါနာ၊ ဂရိ၊ ဂရီနာဒါ၊ ဂွါတီမာလာ၊ ဂီနီ၊ ဂီနီဘစ်ဆာ၊ ဂိုင်ယာနာ ဟေတီ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်၊ ဟန်ဂေရီ၊ အိုက်စလန်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အီရန်၊ အီရတ် အိုင်ယာလန်၊ အစ္စရေး၊ အီတလီ၊ ဂျမေကာ၊ ဂျပန်၊ ဂျော်ဒန်၊ ကာဇက်စတန်၊ ကင်ညာ၊ ကီရီဘာတီ၊ ကိုရီးယား၊ မြောက်၊ ကိုရီးယား၊ တောင်၊ ကိုဆိုဗို၊ ကူဝိတ်၊ ကာဂျစ္စတန်၊ လာအို၊ လတ်ဗီးယား၊ လက်ဘနွန်၊ လီဆိုသို၊ လိုက်ဘေးရီးယား၊ လစ်ဗျား၊ လစ်ချ်တင်စတိန်း၊ လစ်သူယေးနီးယား၊ လူဇင်ဘတ် ၊ Madagascar၊ Malawi၊ Malaysia၊ Maldives၊ Mali၊ Malta၊ Marshall Islands၊ Mauritania၊ Mauritius၊ Mexico၊ Micronesia၊ Federated States of, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar (Burma), Namibia, Nauru, Nepal နယ်သာလန်၊ နယူးဇီလန်၊ နီကာရာဂွာ၊ နိုင်ဂျာ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား၊ နော်ဝေး၊ အိုမန်၊ ပါကစ္စတန်၊ Palau၊ ပနားမား၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ၊ ပါရာဂွေး၊ ပီရူး၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ကာတာ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ရုရှား၊ ရဝမ်ဒါ၊ စိန့်ကစ် နှင့် Nevis၊ Saint Lucia၊ Saint Vincent and the Grenadines၊ Samoa၊ San Marino၊ Sao Tome and Principe၊ Saudi Arabia၊ Senegal၊ Serbia၊ Seychelles၊ Sierra Leone၊ Singapore၊ Slovakia၊ Slovenia၊ Solomon Islands၊ ဆိုမာလီယာ၊ တောင်အာဖရိက၊ စပိန်၊ သီရိ လင်္ကာ၊ ဆူဒန်၊ ဆူဒန်၊ တောင်၊ ဆူရီနမ်၊ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဆီးရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ T အန်ဇန်းနီးယား၊ ထိုင်း၊ တိုဂို၊ တွန်ဂါ၊ ထရီနီဒက်နှင့် တိုဘာဂို၊ တူနီးရှား၊ တူရကီ၊ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်၊ တူဗာလူ၊ ယူဂန်ဒါ၊ ယူကရိန်း၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ အမေရိကန်၊ ဥရုဂွေး၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်၊ ဗာနူအာတူ၊ ဗာတီကန်စီးတီး၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ ဗီယက်နမ်၊ ယီမင်၊ ဇမ်ဘီယာ ဇင်ဘာဘွေ
Dummy Load ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်အကြံပြုချက်မဆို ထိန်သိမ်း Transmitter တွေနဲ့?
ခဏလေး၊ ဘယ်လို transmitter အမျိုးအစားနဲ့ dummy load ကို သုံးနိုင်မလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ မပြောသင့်ပေမယ့် သင့်အတွက် အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်- dummy load နဲ့ FM transmitter ရဲ့ ပါဝါက ဆင်တူနေတဲ့အခါ၊ dummy load မှာ ပါဝါပိုကြီးလေ၊ မတူညီတဲ့ transmitter တွေရဲ့ power တွေကို ပိုသုံးနိုင်မှာပါ။ နည်းလမ်းတစ်ခု၊ သင့်တွင် 20kw dummy load ရှိပါက 20kw အောက်ပါဝါဖြင့် transmitter (50 watt, 500 watt, 600 watt, 1kw, 2kw, 2.5kw, 3kw, 4kw, 5kw, 10kw, etc) ; သင့်တွင် ပါဝါ 200KW အထိရှိသည့် dummy load တစ်ခုရှိသောအခါ၊ သင်သည် ranged power အမျိုးအစားအားလုံး၏ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသော FM transmitter များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဘာကြောင့် Rack ကိုရွေးချယ်တာလဲ။ FM Radio Station အတွက် 20KW RF Dummy Load
ကောင်းသော 20kW RF Dummy Load လိုအပ်ပါသည်။ ထိန်သိမ်း
FMUSER ကို သင်ယုံကြည်သကဲ့သို့ ဤ 20KW RF Dummy Load ကို သင်အပြည့်အဝယုံကြည်နိုင်ပါသည်။
FMUSER 20KW RF Termination လုပ်နည်း ထိန်သိမ်း အလုပ်များ?
RF စနစ်စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် Rack 20kw dummy load (20000w dummy antenna ဟုလည်းလူသိများသည်) သည် အမှန်တကယ် "အင်တင်နာ" အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းကို ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်သူ၏ အထွက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် လျှပ်စစ်ကိရိယာ၏ ဝန်ကို အတုယူရန် အသုံးပြုသည်။ ရေဒီယိုလှိုင်းများ ဖြာထွက်ခြင်းမရှိဘဲ transmitter သို့မဟုတ် receiver ကို စမ်းသပ်ပြီး configure လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ 20kw dummy load rack သည် အများအားဖြင့် transmitter မှ ပါဝါကို စွန့်ထုတ်သည့် ရေတိုင်ကီနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော resistor ပါ၀င်သည် ။
20000 watt dummy load ကို RF ပါဝါကို ပြေပျောက်စေရန် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းကို 50 Ω impedance ဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပြီး VSWR သည် 1.20:1 ထက်မပိုပါ။ ထို့ကြောင့်၊ reflection coefficient နည်းပါးသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် အလွန်အသုံးဝင်သည်။
20KW RF Dummy Load ၏ Fan Assembly ထိန်သိမ်း
Transmitter Interlock ၏ ထိန်သိမ်း 20KW RF Dummy Load
20KW ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ ထိန်သိမ်း RF Dummy Load
20KW RF Dummy Load အအေးခံရန် အကြံပြုချက်များ ထိန်သိမ်း
FMUSER Rack ၏ လျှပ်စစ်အညွှန်း 20KW Dummy Load (ကိုးကားရန်သာ)
ပစ္စည်းအမည်- 20KW RF Dummy Load Rack
AM/MW transmitter ကို စမ်းသပ်ခြင်း၊ လေ၀င်လေထွက်ကောင်းခြင်း၊ ပါဝါပြည့်ခြင်း၊ လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်း။
စံထည့်သွင်းမှုရွေးချယ်စရာများမှာ 1-5/8" Cable Clamp သို့မဟုတ် 1-5/8" EIA အနားကွပ်၊ တောင်းဆိုချက်အရ စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပုံများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
20KW RF Dummy Load အမျိုးအစား လေးမျိုး ထိန်သိမ်း စီးရီး
အလေးချိန်: 600 ပေါင်
အတိုင်းအတာ- 44 x 44 x 78 လက်မ
အလေးချိန်: 225 ပေါင်
အတိုင်းအတာ- 40 x 16 x 60 လက်မ